Ring: GNU / Linux တွင် Skype အတွက်အစားထိုးခြင်း Linux မှ
၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးသူအရသိရသည် (Savoir - Faire Linux), လက်စွပ် es una ဆက်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်း လုံခြုံသောအသံ နှင့်ဖြန့်ဝေ, ဗီဒီယို နှင့် chat မည်သည့်မလိုအပ်ပါဘူး ဗဟိုဆာဗာ ခွင့်ပြုပါ စွမ်းအား ၏ privacy ကို၏ Las အသုံးပြုသူလက်.
လက်စွပ် es un ကုဒ်ဆော့ဖ်ဝဲ ပွင့်လင်း ဆက်သွယ်ရေးများအတွက် အဲဒါကိုခွင့်ပြုပါတယ် အသုံးပြုသူများသည်ဖုန်းခေါ်ဆို အသံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုနှင့် ပေးပို့ ပို့စ်များကို လုံခြုံတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ယုံကြည်မှုနဲ့. ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည် နှင့် ဖုန်းဝန်ဆောင်မှု သမားရိုးကျသို့မဟုတ် ပေါင်းစပ် မည်သည့်ကိရိယာကိုမဆို တယ်လီဖုန်း ချိတ်ဆက် အလွန် fအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်တစ် ဦး ၏ပေါင်းစပ် နည်းပညာများ နှင့်တီထွင်မှု ပွင့်လင်း အမျိုးမျိုးသော အလားအလာများ မှလာသည် ၎င်း၏အသုံးပြုသူများသည် နှင့် developer များ။ ပြီးတော့ဖြစ်ခြင်း ကုဒ်ဆော့ဖ်ဝဲ ပွင့်လင်း ကြောင်းစစ်ဆေးရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးတော်မူ၏ ဒါဟာမဖြစ် တစ်ခု software ကို ထိန်းချုပ်မှု အသုံးပြုသူမှ, ဒါပေမယ့်အပြန်အလှန်။
သူတို့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်သည်အချည်းနှီးမဟုတ်ပါ With Ring, ထိန်းချုပ်ပါ သင့်ရဲ့ဆက်သွယ်ရေး၏!
သင်၏လျှို့ဝှက်ချက်: ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်မရှိပါ သိမ်းဆည်းထားသည် ဗဟိုဆာဗာပေါ်မှာ. ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ဖန်တီးရန်မဖြစ်နိုင် မှတ်တမ်းများ အဲဒါကို run သို့မဟုတ် installed ရှိရာအသုံးပြုသူများအပေါ်။ အမည်ဝှက်ခြင်း y el privacy ကိုလေးစားခြင်း ကြိုတင်အာမခံနေကြသည်။
သင့်ရဲ့လုံခြုံရေး Eကအာမခံသည် encryption ကိုနည်းလမ်းများ y လက်မှတ်များ၏အသုံးပြုမှု. အသံ, ဗီဒီယိုနှင့်စာသား သူတို့ကသို့လှည့် စာဝှက်ထားတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခု လက်ခံသူသာ decipher နိုင်ပါတယ်.
သင်၏လွတ်လပ်မှု Es ကုဒ် software ကို ပွင့်လင်း လိုင်စင်ရ GPL v3. သင်၏သုံးစွဲသူများသည်လုပ်နိုင်သည် အတည်ပြုရန် အ ကုဒ်များ နှင့်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ပါဝင်သည် အသစ်များ တိုးတက်အောင်လုပ်ပါ software စွမ်းဆောင်ရည်. ဒါကအာမခံချက်ကိုပေးသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု နှင့်လွတ်လပ်ခွင့် အားလုံးအတွက်!
Multiplatform အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်: GNU / Linux (Gnome အောက်ရှိ)၊ MS Windows၊ Mac OS X နှင့် Android ။
သင်၏စာကြည့်တိုက်များ ရေးထားလျက်ရှိ၏ QtCore, လွယ်ကူချောမွေ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဖောက်သည်များ ကွဲပြားခြားနားသော operating system များအကြား.
သင့်ရဲ့ပြည်တွင်းရေးအပြောင်းအလဲနဲ့နည်းလမ်းများ အသုံးပြုမှု ha D-ဘတ်စ်ကား. Permအကြားဆက်သွယ်ရေး itating စာအုပ်ဆိုင် LibRingClient y တဏှာ, client အတွက်ပါ ကို GNU / Linux ကို.
လျှောက်လွှာ၏အဓိက (LibRing) အပြန်အလှန်အကျိုးမရှိ အသုံးပြုသူများနှင့်အတူ သို့သော်ထိုသို့ဖြစ်သည် တစ်ခုချင်းစီကိုပတ်ရစ် လျှောက်လွှာသူ့ဟာသူ၏စစ်ဆင်ရေး.
ဤအရာအလုံးစုံဒြပ်စင် သူတို့ကပါဝင်သည် ပြင်ပစာကြည့်တိုက်များ သူတို့မောင်းတယ် နည်းပညာများသို့မဟုတ် ဖွင့် protocols များ နှင့်အထူးပြု။
လက်စွပ် အပေါ်အခြေခံသည် လေး ပြင်ပစာကြည့်တိုက်များဘယ်မှာ သူတို့တစ်ဦးစီ လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထွက်သယ်ဆောင် တိကျတဲ့။ သူတို့က:
OpenDHTအာမခံချက် Comunicaciones ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချ။
g ကတည်းကလျှို့ဝှက်ချက်ကိုအာမခံပါသည် ဆက်သွယ်ရေး၏ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ် လက်စွပ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ နှင့်ငsta es အကြောင်းပြချက် င်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည် စနစ်တစ်ခု ဆာဗာမရှိဘဲ အလယ်ပိုင်း, ပေါ်အခြေခံကာ တန်းတူဆက်သွယ်ရေး တန်းတူ (အဆင့်အတန်းတူညီသူအချင်းအချင်းဆက်သွယ်မှု). con ဘယ်မှာမော်ဒယ် အရေးကြီးသောဒေတာ သိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါ နေရာတစ်ခုမှာ ထူးခြားပေမယ့် Que တိုးချဲ့ များစွာသောအသုံးပြုသူများအကြား.
ကိုရှာဖွေရန် အတွက်ဒေတာ (သတင်းအချက်အလက်) ဗိသုကာတစ်ခု သက်တူရွယ်တူ-to- သက်တူရွယ်တူ, သငျသညျလုပ်ဖို့နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် လွယ်ကူသောရှာဖွေမှုများဟုတ်ကဲ့ste ၏အခန်းကဏ္isကိုဖြစ်ပါတယ် la ဇယားစာကြည့်တိုက် (အခမဲ့လိုင်စင်) ပေါ်အခြေခံကာ OpenDHT ဖွံ့ဖြိုးပြီး အဖွဲ့၏ developer များက (Savoir - Faire Linux). Eရေးသားခဲ့သည် C++ he မှုတ်သွင်း DHT (ဖြန့်ဝေသည် Hash စားပွဲတင်) ဤ တွေ့ပြီ အပြည့်အဝ ၏လိုအပ်ချက်များ လက်စွပ်. အဖြစ် တစ်ခုသာသုံးပါ အခြေခံ hash ဇယား မသန်စွမ်း encontrar ၏အိုင်ပီလိပ်စာ အသုံးပြုသူတစ် ဦး. လည်း, စာအုပ်ဆိုင်ကဆိုသည် ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုသည် အခြားသူတွေ အလင်းဒေတာ. ဥပမာအား, OpenDHT puede တွဲဖက် အများသုံးသော့ချက် နှင့် မှတ်ပုံတင်လက်စွပ် နိုင်ရန်အတွက် encrypt လုပ်ပါ ပို့စ်များကို.
PJSIP: ခွင့်ပြုရန် နှင့်ဆက်သွယ်မှုများ ရိုးရာတယ်လီဖုန်း.
၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ ဘာလုပ်သလဲ လက်စွပ် သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုလက်လှမ်းမီပါ လူများဖြစ်နိုင်သောအရေအတွက်, ဒါကြောင့်ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် PJSIP (Pပက်လက် SIP ဖွင့်လှစ်) ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအဘို့ အသုံးပြုသူအစည်းအဝေးများ. ဒီ protocol ကို အလွန်လူကြိုက်များသည် ၏အသိုင်းအဝိုင်း တယ်လီဖုန်းနှင့် သယ်ဆောင်မထားဘူး ဒေတာ - ဟုတ်တယ် ဖျန်ဖြေသူ. ရိုးရိုး ဆက်သွယ်ပါ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများ entre အသုံးပြုသူများသည် သဟဇာတ. သော်လည်း မူလ SIP အခြေခံသည် ဗဟိုဆာဗာများပေါ်မှာ, ၎င်း၏ developer များရှိသည် ပြုပြင်ထားသော အဆိုပါ protocol ကို မိတ်ဆက်ပေးရန် OpenDHT နှင့်ခွင့်ပြုပါ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေး။ ထို့ကြောင့်မြင့်တက်ပေးခြင်းn app တစ်ခု, အဆိုပါ protocol ကို ပူးပေါင်းရန်လွယ်ကူချောမွေ့ ရိုးရာတယ်လီဖုန်း (နှင့်အတူ SIP အကောင့်တစ်ခု) နှင့်ဆက်သွယ်ရေး ခေတ်သစ် (အကောင့်တစ်ခုနှင့်အတူ လက်စွပ်) တစ်လမ်းအတွက် အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။
GnuTLS: ရပ်အင်အားစု စီမံခန့်ခွဲမှု လုံခြုံရေး။
GnuTLS စီမံသည် လက်မှတ်များ, သော့ နှင့်နည်းလမ်းများ စာဝှက်ခြင်း el အသံ၊ ဗီဒီယိုနှင့် စာသား။ El အသံနှင့်ဗီဒီယို မှတဆင့်ဖြန့်ဝေ လုံခြုံသောလိုင်းများ နှင့်လိုက်နာပါ တင်းကျပ်သောစံချိန်စံညွှန်းများ SRTP (လုံခြုံသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး protocol ရီးရဲလ်အချိန်). Este protocol လိုအပ်သည် စကားဝှက်များထက် စာဝှက်ထားတယ် သူတို့ညှိနှိုင်း နည်းလမ်းအရသိရသည် ကျောက်တံတား-Hellman ပါ။ အဆိုပါ စာသားဆက်သွယ်ရေး ဖြန့်ဝေ တစ်ခုခုထဲမှာ အစစ်အမှန်အချိန် တူးမြောင်းကိုဖြတ်ပြီး SIP ဒါမှမဟုတ် OpenDHT ဘယ်အချိန်မှာ မက်ဆေ့ခ်ျကိုလက်ခံရရှိသူ အွန်လိုင်းမဟုတ်။ la လုံခွုံရေး ဒါအတွက် dos စနစ်များ ကထောက်ပံ့သည် protocol ကို TLS.
FFMPEG y လစ်ဘာ: စီမံခန့်ခွဲရန် အသံနှင့်ဗီဒီယို.
၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ ပြုပါ ဒေတာလွှဲပြောင်း so rမြန်မြန် အလင်းရောင်, လက်စွပ် usa ကုဒ်များ ချုံ့နှင့် decompression အဆိုပါကာလအတွင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။ ဒီ codecs ကစီမံခန့်ခွဲသည် Las စာကြည့်တိုက် FFMPEG y လစ်ဘာ အသံနှင့်ဗီဒီယိုသည်.
အသုံးပြုတဲ့ codec များမှာ
download လုပ်ရန်အတွက်သင်အလွယ်တကူနှိပ်နိုင်သည် download အပိုင်း (download) Developer မှ၎င်းကိုထည့်သွင်းပါ
အတွင်းရှိပလက်ဖောင်းတစ်ခုစီအတွက်လွယ်လွယ်ကူကူအဆင့်ဆင့်ဖော်ပြပြီးပါက tutorials အပိုင်း developer မှ:
အတိုချုပ်ဆိုရလျှင် Ring သည် GPL အခမဲ့ဆက်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းဖြစ်ပြီးအသံဖိုင်သို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများပြုလုပ်နိုင်ပြီးစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများကိုလုံခြုံစွာပို့နိုင်သည်။ စီမံကိန်းကိုအမှခေံ sflphoneအဆိုပါ လက်စွပ် ကျွန်တော်တို့ကိုဗဟို ဦး စနစ်ကပေးထားပါတယ် အဆင့်အတန်းတူညီသူအချင်းအချင်းဆက်သွယ်မှုသီးခြားကွန်ယက်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ဒေတာအချက်အလက်များကိုဗဟိုဆာဗာတွင်သိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိဘဲသိုမှီးထားခြင်းဖြစ်သည် စာဝှက် AES 128 အားလုံးမာလ်တီမီဒီယာဆက်သွယ်ရေး၌တည်၏။
လည်း လက်စွပ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီများမှအသုံးပြုသော SIP ကဲ့သို့သော protocol များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည် အသံနှင့်လည်းအတူ IAX2နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့ခွင့်ပြု ကြယ်မှတ်။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး စီတွင်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာရှိသည် (RingID) ၄၀ အက္ခရာနံပါတ်ပါ ၀ င်သည်။ ၄ င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်များနှင့်ဆက်သွယ်ရာတွင်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်စွက်နိုင်သည်သို့မဟုတ်အခြားသူများထပ်ထည့်နိုင်သည်။
Desktop နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း GNU / Linux များ ကလုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ် GNOME အဆက်အသွယ်များ (အခြားပါတီတွင်လည်း RingID ရှိနေ သ၍) Android မိုဘိုင်းမှ၎င်းသည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းဝေမျှရန်ရွေးချယ်စရာများစွာပေးထားသည်။ သို့သော်လွယ်ကူစွာအသုံးပြုရန်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းသည်မကြာမီထပ်မံထည့်သွင်းတော့မည်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့အဆင့်မြင့်လုပ်ဆောင်ချက်များထဲမှာအသံနှင့်ဗွီဒီယိုကုဒ်နံပါတ်အမျိုးမျိုး၊ သမိုင်း၊ စကားပြောဆိုမှုကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ လက်မှတ်များ (သို့) စာဝှက်ခြင်းစသည်တို့ကိုပံ့ပိုးပေးတယ်။
လုံးဝ cross platform ဆဲပြည်နယ်အတွက် beta ကို, Ring အတွင်းအလွန်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားထုတ်လုပ်နေသည် အဆိုပါစိတ်အားထက်သန် က ဆက်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်း အတွင်းဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ အသိုင်းအဝိုင်း de ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်နှင့်အခမဲ့ဆော့ဝဲ.
၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တည်ဆောက်သူများ၏အဆိုအရ လက်စွပ် «es ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတခု, သို့သော်ထိုသို့ဖြစ်သည် ထက်ပိုသောအရာတစ်ခုခု ကိရိယာတခု။ အခြေခံသည် ရပ်ရွာ။ ၎င်းသည်ပိုင်ဆိုင်သည် က se ခိုင်မာစေ သူမ၏မှတဆင့်«.
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအရ၊ ကျွန်ုပ်သည်တပ်ဆင်ပြီးနောက်ယခုကျွန်ုပ်သည် လက်စွပ် အဆိုပါအညီ DEBIAN 8 ကို အသုံးပြု၍ GNU / Linux အတွက် developer လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည် terminal မှတဆင့် download လုပ်ထားသော package များကို install လုပ်ပြီး install လုပ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နောက်ဆုံး update ကိုအတည်ပြုရန်၊ repositories နှင့် pack များကို install လုပ်ပြီးသား update လုပ်ပါ (လက်စွပ်အပါအဝင်)
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်၎င်းကိုမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုရန်၎င်းအားတိုက်ရိုက်စမ်းသပ်မှုပြုသည် စွမ်းဆောင်ရည်, တည်ငြိမ်မှု, ရွေးချယ်စရာများနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း:
နောက်ဆုံးတော့ကြီးစွာသောစမ်းသပ်မှု ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုနှင့်စကားနည်းနည်း၊ Tenerife ကျွန်းစုမှစပိန်ပူးပေါင်းသူကြီးတစ် ဦး Tybalt ကိုခေါ်
ပြီးသားငါ့အပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်၌တည်၏ ၎င်းသည်အိမ်တွင်း Linux တွင် Skype ကိုအသုံးပြုသောသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မဟုတ်သောသို့မဟုတ်အလုပ်အဆင့်ရှိသူများကိုအစားထိုးရန်အတွက်ရင့်ကျက်သော software တစ်ခုဖြစ်သည်။ surelyကန်အမှန်အလွန်မကြာမီပြုလုပ်အဆင့်မှာဖြစ်လိမ့်မည်! ထိုအကသိသာတစ် ဦး လိုအပ်သည် ကောင်းသော bandwidth or link အရည်အသွေးနှင့်ကင်မရာပါ ၀ င်သည် နားထောင်သူနှင့်အရည်အသွေးကောင်းသည့်ဗီဒီယိုနှင့်အသံတို့ကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Ringtone - GNU / Linux ရှိ Skype အတွက်အစားထိုးတစ်ခု
ဖရန့် Yznardi Davila ဟုသူကပြောသည်
နှင့်အခြား distros များအတွက်?
Frank Yznardi Davila ကိုပြန်ပြောပါ
Mauricio Gomez ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီဒါကဘာဖြန့်ဖြူးမှုအပေါ်မှာမူတည်တယ်။ Arch မှ AUR တွင်သင်ရှာနိုင်သည်။ မရရှိပါက၎င်းကို source code မှထည့်သွင်းရန်လိုလိမ့်မည်၊
ငါ့မှာ KitKat နဲ့ moto g ရှိတယ်။ ဒါကအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ လက်စွပ်
အခုအချိန်မှာတော့ Gnome desktops တွေအတွက်ပဲလား။
အခြေခံအားဖြင့်၎င်းကို Skype မှအခမဲ့ရွေးချယ်ခွင့်ကိုအကြီးအကျယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်၊ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်၊ အက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သည့် Skype သည်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်မှဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အကြီးမားဆုံးခေတ်မမီတော့သော Linux တွင်လည်း ပို၍ ဖြစ်သည်။ privacy ကိုတန်ဖိုးထားသူတိုင်းသည်သင်၏အလွန့်အလွန်ကောင်းသောရေးသွင်းချက်ကိုဖတ်သည့်အခါအနည်းဆုံးကြိုးစားသင့်သည်။ အလုပ်ကောင်း၊ အင်ဂျင်နီယာဂျိုဟန်အဲလ်ဘတ်
၎င်းသည် Distros အမျိုးမျိုးအတွက်အလုပ်လုပ်သော်လည်းယခုအချိန်တွင် DEBIAN, Ubuntu နှင့် Fedora တို့သာအသုံးပြုနိုင်သည်။
ကြည့်ရသည်မှာ၎င်းသည် gnome အတွက်သာဖြစ်သော်လည်းအခြားပတ်ဝန်းကျင်တွင်စမ်းသပ်သင့်သည်။
KDE in ဖြင့် Mint Rosa တွင်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ
Xfce နဲ့ Mint Rafaela မှာအလုပ်လုပ်တယ်၊ start bar ရဲ့ tray မှာ icon မရှိပေမယ့်နောက်ကွယ်မှာ run နေတယ်။
ထင်မြင်ချက်တစ်ခုသာ - အကယ်၍ သင်သည် Skype ကွန်ယက်နှင့်ဆက်သွယ်မှုမရှိပါကစီးပွားရေးအဆင့်တွင်မည်သည့်နေရာတွင်အစားထိုးမည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏အလုပ်တွင်ဆက်သွယ်မှုအားလုံးကို Skype မှပြုလုပ်သည်၊ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပြီးအခမဲ့ဖြစ်သည့်အရာတစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်ဟုမထင်ပါ၊ အနာဂတ်တွင်မည်သို့ဖြစ်သွားနိုင်သည်ကိုသိရန်အတွက်တစ်ခုခုအတွက်၊ သင်၌အထောက်အပံ့ရှိသည်။ ထို့အပြင်အရာတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်လျှင်တိုင်ကြားရန်သင့်အားမည်သူမျှမရှိပါ။
Skype ကအထောက်အပံ့ပေးပါသလား။ မဟုတ်ဘူး။ ငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုများ၌ပင်သင့်တွင်အောင်မြင်မှုမရှိပါကသူတို့သည်သင့်ကိုအသုံးပြုသူဖိုရမ်သို့သာသွားပြီးသင်တစ် ဦး တစ်ယောက်ကသင့်အားမည်သို့ဖြစ်ပျက်သည်ကိုသင်ကြည့်ပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖိုရမ်များကိုအကဲဖြတ်ပါက opensource အသိုင်းအဝိုင်းမှသူများသည်အမြဲတမ်းပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်ခြင်းသည်အမှားတစ်ခုပေါ်ပေါက်ပါကလူများစွာသည်ဖြေရှင်းချက်များပေးနိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ စီးပွားဖြစ်အသုံးချပရိုဂရမ်ပညာရှင်များသည်သုံးစွဲသူများအား 'standard' ၏အယူအဆကိုတင်နိုင်သည့်အသုံးချပရိုဂရမ်၏အတွင်းနှင့်အပြင်ကိုမသိဘဲအသုံးပြုသူအားထိန်းသိမ်းရန်အာရုံစိုက်သည်။ ဥပမာ IE ။ 😛
ပြီးတော့ငါထင်တာကတော့အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကတော့ပရောဂျက်များအဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာတာတွေ၊ အစားထိုးလို့မရတဲ့သူတွေပဲ၊ သင်မယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့လူတွေရဲ့ထုံးစံအရ၊ သူတို့ဟာအချိန်က Firefox လိုမျိုးခြွင်းချက်များနှင့်အတူ IE ကိုကျော်နိုင်ခဲ့တယ်၊
အကယ်၍ ၎င်းသည်ဗဟိုဆာဗာလိုအပ်ခြင်းမရှိဘဲ VOIP ဆက်သွယ်မှုများကိုဖြေရှင်းနိုင်လျှင် (သို့) သက်တူရွယ်တူအချင်းချင်း protocol များကိုတိုးချဲ့လျှင်၎င်းသည်သူ့ဟာသူပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မျှ Skype ကိုထိုအကွာအဝေးတွင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
"အစားထိုး" ဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်တော့်ကိုထည့်သွင်းလိုက်တယ်။ အဲဒါကိုသူတို့က Skype အတွက် "အစားထိုး" အဖြစ်ဖန်တီးလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။
သို့သော်၊ သင်ပြောသည့်အရာမှာအလေးချိန်နှင့်ယုတ္တိရှိသည်။ သို့သော်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်ဟုသေချာစွာမသတ်မှတ်ထားပါ။ ၎င်းသည် SIP နှင့် VoIP အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်လိုက်ဖက်ပါက Skype နှင့် Ring သည်အင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအခမဲ့နှင့်စီးပွားဖြစ်ပလက်ဖောင်းများအောက်တွင် video call clients များအနေဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
Mmhh …ငါထင်တဲ့မှတ်ချက်ကိုမင်းဖတ်ဖူးတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ဗဟုသုတအရ "ရိုးရှင်းသော" နည်းပညာအဆင့်တွင် Skipe က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပရိုတိုကောကိုအသုံးပြုသည်။ Skip protocol နှင့် application များကို "သဟဇာတ" ဖြစ်စေရန်ကြိုးပမ်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြသော်လည်းအထူးသဖြင့်၎င်းသည် M $ ​​အတွက်ဝယ်ယူခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေး application ၏အောင်မြင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်မှတ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်သဘောတူသည်။ Skipe ကိုအထူးသဖြင့်စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွင်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည်အလွန်ခိုင်မာသောကြောင့် application တစ်ခုသည်ထို protocol နှင့်မကိုက်ညီပါကအမြစ်တွယ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် Ekiga နှင့်သာဓကတစ်ခုရှိသည်။ သူသည်အရာဝတ္ထုအားလုံး၌ "စံ" ဖြစ်သော်လည်းစီးပွားရေးအဆင့်တွင်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှမသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါသိတဲ့အတိုင်းငါပြောခဲ့တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါနဲ့နီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုးတစ်ယောက်ကပြောတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးအဆက်အသွယ်တွေအားလုံးက Skipe ကိုသုံးတာကြောင့်တခြားသူတွေကိုလိုက်ဖက်ညီအောင်လုပ်တာကိုအတင်းအကျပ်လုပ်တာ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ M $ သည်သူ၏နှာခေါင်းထဲသို့ထည့်ထားသောတစ်ခုခုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်မဖြစ်နိူင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်တော်မသုံးသော Skip အမှတ်အသားနှင့်ကော်ပိုရိတ်မလွှဲပြောင်းမီမတိုင်မီ (မေ့သွားသည်) ။ တကယ်တော့ကျွန်တော်ဟာGüin2ကိုလိုအပ်ချက်အရပဲသုံးပြီးသူတို့နဲ့အတူတပ်ဆင်ထားတဲ့ spyware network (xp-antispy, DisableWinTracking, etc) ကိုသုံးဖို့ပရိုဂရမ်အမျိုးမျိုးကိုသုံးခဲ့တယ်။ ဒီပရိုဂရမ်အချို့မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Big Brother အရာသည်ဟာသမဟုတ်ကြောင်းနားလည်သည်။ W10 သည်နောက်ဆုံးကောက်ရိုးငွေ့ပြီးပြီဖြစ်သော်လည်း UEFI စနစ်များတွင်ကွန်ယက်လုပ်ဆောင်ချက်များကို firmware အဆင့်တွင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်ဟုစဉ်းစားသည်။
ဟိုဆေးလူးဝစ္စ Ruiz နေရာချထားပုံ ဟုသူကပြောသည်
အချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါ Ubuntu 14.04 ရှိသည်။
Jose Luis Ruiz ကိုပြန်ပြောပါ
ရက်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်နားကြပ်များမရှိသောကြောင့် ၁၀၀၁ မှအချို့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအကြိမ်ကြိမ်ကျွန်ုပ်ခံယူခဲ့သည်။ စပီကာများမှနားထောင်ရန်ကျွန်ုပ်ထင်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်နားမလည်သောအခါမည်သည့်အရာမျှမကြားရသောကြောင့် ချိတ်တက်ခူး။ မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုရန်ပေးပို့သောစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများကိုလည်းမည်သူမျှတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပါ။
အမှန်တရားဟာကျွန်တော့်ကိုမဖြစ်ခဲ့ဘူး၊ ငါဟာသူ့ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာပေါ်မှာအလားတူအရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေခဲ့တယ်။ ငါသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
webrtc နှင့်ပါသောဗားရှင်းရှိသော FIrefox Hello သို့မဟုတ် Jitsi ကဲ့သို့သောဆက်သွယ်ရေးစံနှုန်းများကိုအသုံးပြုသော application များကိုကျွန်ုပ်ပိုနှစ်သက်သည်။ အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့အခြားပရိုဂရမ်များနှင့်သင်ဆက်သွယ်ချင်သည့်မည်သည့်အစီအစဉ်ကိုမဆိုအသုံးပြုနိုင်ရန်အခမဲ့ဆက်သွယ်ရေးစံနှုန်းကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။
Julius Saldivar ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ ဤဖြေရှင်းချက်သည် PJSIP ကိုသိမ်းဆည်းပါက၎င်းသည် ၄ ​​င်း၏ဆက်သွယ်ရေးအခြေခံအနေဖြင့် SIP ကိုသိမ်းပိုက်ပြီး၎င်းသည်ဆက်သွယ်ရေးစံနှုန်းဖြစ်ပြီးဗီဒီယိုအတွက် VP8 နှင့်အသံအတွက် OPUS သည်အခမဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြင့်မြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။
Julio Saldivar အားပြန်ပြောပါ
ကောင်းပြီယခု linux အတွက် Skype အထောက်အပံ့ကိုအရှိန်မြှင့်လိုက်သောကြောင့်၎င်းကိုကြိုးစားရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်